ငါဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုစားဖို့အတွက်အစားအစာကိုအရမ်းနှစ်သက်တယ် - သတင်း
White Chicks ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်နေစဉ်၊ ဒီမြင်ကွင်းမှာထက်ပိုပြီးကိုယ်စားပြုတာကိုငါမခံစားရဘူး။
ဘာဖြစ်လို့ tequila ငါ့ကိုရူးတာလဲ
ငါ dainty စားချင်သောသူ၏ပဘူး။ ငါaည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်၊ ငှက်လိုငှက်မစားချင်ဘူး၊
ကျွန်တော့်အတွက်အသုပ်မရှိပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့ကိုရရှိနိုင်တဲ့အစပ်စပ်ဆုံးအတောင်ပံတွေကိုပေးပါ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအထင်ကြီးစေရန်ငါမလိုချင်သောအသုတ်တစ်မျိုးကိုအဘယ်ကြောင့်ငါမှာယူမည်နည်း။ ဒီဘေကွန်ဒိန်ဘာဘာကိုအောက်ခြေမရှိကြော်ထည့်ပါရစေ။ ပြီးတော့နောက်မှရေခဲမုန့်ယူဖို့ကျွန်တော့်ကိုပိုကောင်းပါစေ။ ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့မယ်ဆိုရင်ငါသူတို့ကိုယ်သူတို့ငါဝါသနာရှင်စားတဲ့သူလို့ချက်ချင်းသိထားတယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုရှက်ဖို့ငါမငြင်းဘူး။
တစ်ခြားနေ့ကသူငယ်ချင်းစုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ကျွန်တော်မနက်လည်စာစားခဲ့တယ်။ ကြက်ဥ (၃) လုံး၊ ပေါင်မုန့်၊ ဘေကွန်၊ နံနက်စာအာလူး၊ ငါကအားလုံးကိုစားလိုက်တယ်၊ အရသာရှိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုငါနှစ်သက်တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ဒီဟာကိုအစားအစာနဲ့ချစ်တာကဈေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာပြောရမလဲ။ အစားအစာသည်အကောင်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။
ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မစားရဘူး။ သေချာတာပေါ့၊ ငါဟာသင့်တော်တဲ့စားပွဲအမူအကျင့်ကိုသင်ယူခဲ့ပြီးစုံတွဲတစ်တွဲကိုဖဲ့ခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးမေမေ၊ ကျွန်မက Elf ကနေ Buddy လို burp နိုင်ရင်မင်းကငါကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောလိမ့်မယ်လို့မင်းပိုယုံတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုစားလို့မရဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ နံနက်စာစားရန် Oreos လား ညာဘက်ကိုတည့်တည့်သွားပါ! ညစာမစားမီ Hot Pockets၊ ရေခဲမုန့်နှင့်ပြောင်းဖူးပေါက်တစ်ပုလင်းတို့ကိုစားလိုပါသလား။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အမဲသားများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းကိုကယ်တင်သကဲ့သို့, အဖေကချက်ပြုတ်နေသည်!
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤသူအပေါင်းတို့ကို 100 ရာခိုင်နှုန်းအစစ်အမှန်ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုယခုအားဖြင့်ငါ၏အစားခွက်သံသယကြသည်မဟုတ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူမရဲ့ Fruit Loop ဒေါင်းနစ်ကအရမ်းအရသာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကငိုခဲ့တယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့မိသားစုကပိုဆိုးလာတယ်။ ငါအလွယ်တကူဇီဝြဖစ်နှင့်အတူဝမ်းကွဲနှင့်အတူကြီးပြင်းခြင်းနှင့် Thanksgiving အမြဲမာရသွန်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ မိနစ် ၃၀ အပြီး၊ ကြက်ဆင်ပြား၊ အာလူးထုပ်၊ ညစာလိပ်နှင့်အဘိုး၏မြေပဲထောပတ်ဘောလုံးတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အစာအိမ်ထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်း - အစာမစားခင်၊ ကျွန်တော့်မိသားစုကအစားအစာကိုဗဟိုပြုတယ်၊ ဘာသာတရားကိုကြည့်တာကငါ့ရဲ့မိသားစုကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောပဲ။
အစားအစာကကျွန်မရဲ့မိသားစုကိုအတူတကွခေါ်ဆောင်လာရုံသာမကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုအတူတကွပေါင်းစည်းစေသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများကအရှက်ကင်းမဲ့စွာငါနှင့်အတူပီဇာကြီးတစ်လုံးကိုမှာယူပြီးထိုအရာအားလုံးကိုစားလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ငါ့ကိုသူတို့၏အစားအစာများကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးမည့်သူများဖြစ်သည်။ ငရဲ၊ ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကငါသိသမျှအရှုပ်အရှင်းဆုံးစားတဲ့သူပါ၊ အရာခပ်သိမ်း၏ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်း၊ စားခြင်းအလေ့အထများကိုဝေဖန်ခြင်းမပြုခြင်း၊ ဤလူများသည်သူတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ခြင်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအမျိုးသမီးများဘာမျှမတတ်နိုင်သောအစာစားရန်မျှော်လင့်ရသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်အစားအစာချစ်သူများကိုရှာတွေ့ခြင်းသည်အလွန်လန်းဆန်းစေသည်။
ငါ့ကိုရေခဲမုန့်တစ် Snapchat ပို့ပေးပါဒါကြောင့်ငါကစစ်မှန်တဲ့ရဲ့ငါသိ၏
သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျား၌ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေရမည်နည်း။ ကျန်တဲ့တစ်သက်တာလုံးကိုငါဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါငါအရမ်းပြည့်နေလို့ပီဇာနှစ်ခုကိုက်အောင်လုပ်ချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တာ၊ ပီဇာအချပ်ကြီးသုံးခုရချင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါနဲ့ငါ့ရဲ့အစားအစာကိုသူနဲ့မျှဝေချင်သလား။ ငါအဆုံးစွန်သောပိုကောင်းအသံထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ်ယောက်ကိုအထင်ကြီးစေရန်မည်သူကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသင့်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ လူတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏ Chipotle - စားနိုင်စွမ်းကိုသဘောမကျပါကသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအထင်ကြီးခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများသည်အစားအစာများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်သည်လည်းတိုးတက်လိမ့်မည်။